ओलीले रविन्द्र अधिकारीको मृत्युपछि पर्यटन मन्त्रालयबाट किन बाँडे २६ करोड ? - अभियान खबर
ओलीले रविन्द्र अधिकारीको मृत्युपछि पर्यटन मन्त्रालयबाट किन बाँडे २६ करोड ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्हामलेका बेला २६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बाँडेका छन् । मन्त्रालयअन्तर्गतको संस्कृति, प्रवद्र्धन कार्यक्रम शीर्षकमा प्रधानमन्त्रीले यसरी रकम वितरण गरेका हुन् ।
तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी अधिकारीको फागुन दोस्रो साता निधन भएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले यस मन्त्रालय सम्हालेका थिए । मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री रहे पनि उनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको थिएन ।
गत साउन १५ मा योगेश भट्टराई मन्त्री भएसँगै मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले छाडेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अग्रसरतमा ५२ संस्था र प्रतिष्ठानलाई २६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको हो । विभिन्न राजनेता, पार्टीका नेताको नाममा खुलेका तथा साहित्यकार र कलाकारका नाममा खुलेका संस्था र प्रतिष्ठानलाई यो रकम वितरण गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका २९, झापाका २, बागलुङका ३, कास्कीका २, मोरङका १, कञ्चनपुरका २ लगायतका प्रतिष्ठानलाई यसरी रकम बाँडिएको थियो । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा दीपेन्द्र थापाले लेखेका छन् ।
सदनको अवरोध हटाउन महराको नयाँ प्रस्ताव, सर्वदलीय बैठक बोलाए
Posted on August 1, 2019 Author abhiyaan
काठमाडौँ, १६ साउन । सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदमा निरन्तररुपमा प्रतिपक्षी दलहरुले गरिरहेको अवरोध हटाउन मध्यमार्गी विकल्प अगाडि सारेका छन् । सर्लाही घटना छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित विपक्षी दलहरूले सदन अवरुद्ध गरिरहेका बेला सभामुख महराले मध्यमार्गी विकल्प अगाडि सारेका हुन् । उनले नयाँ समिति गठनमा दलीय सहमति नभए सदनकै उक्त विषयको क्षेत्राधिकार रहेको […]
सरकारले पर्यटन बर्ष २०२० लाई असफल बनाउने खोजेको भन्दै नेबि संघले पार्टीलाई गरायो ध्यानाकर्षण
Posted on July 7, 2019 July 8, 2019 Author abhiyaan
काठमाडौं असार २२ नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघले पर्यटन बर्ष २०२० लाई सफल बनाउन बिदेश स्थित जनसम्पर्क समितिलाई चलायमान बनाउनु पर्ने भन्दै आज पार्टीको केन्द्रिय कार्यलय सानेपामा पार्टीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारले पर्यटन बर्षलाई असफल बनाउन लागेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले त्यतातिर ध्यान दिएर सरकार भन्दा एक कदम अगाडि बढेर पर्यटन बर्ष सफल बनाउन आफ्ना […]
गच्छदारलाई बढीमा १५ केन्द्रीय सदस्य
शास्त्रका अनुसार यी ३ राशि भएका पुरुषलाई पाउन मरिहत्ते गर्छन् युवतीहरू